Obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa: site na Tokyo ruo Toronto | Akụkọ njem
Louis Martinez | | Obodo, Nduzi
Ekpebila obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa site n'ọmụmụ nke ngalaba ọgụgụ isi nke akwụkwọ akụkọ America a ma ama kwadebere The Economist. Maka nke a, ndị na -elekọta ya mụrụ ngụkọta nke nnukwu obodo iri isii.
Banyere nke ọ bụla n'ime ha, ha nyochara ihe anọ. Nke mbụ bụ nchekwa dijitalụ, ya bụ, ịbanye na ịntanetị nke ndị bi na ya na etu esi ekpughere ha na mwakpo ịntanetị. Akụkụ nke abụọ bụ ahụike na gburugburu ebe obibi (ịdị mma ikuku na mmiri, yana ịdị ọcha nke okporo ụzọ ya). Nke atọ lekwasịrị anya n'ịgbanwe atụmatụ ime obodo ya na ụmụ amaala, ya bụ, ọnụọgụ nke mpaghara ndị na -agafe agafe ma ọ bụ mpaghara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. N'ikpeazụ, nke anọ bụ mpụ onye tara ahụhụ site na mpụ mpụ n'okporo ụzọ na nrụrụ aka ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata aha obodo ndị a, anyị na -agba gị ume ka ị gaa n'ihu na -agụ akwụkwọ.
1 Obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa: site na Tokyo ruo Toronto
1.2 2.- Obodo Singapore
1.3 3.- Osaka, onye Japan ọzọ n'etiti obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa
1.5 5.- Sydney, nnọchite anya Australia n'etiti obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa
1.6 6.- Toronto, obodo Amerịka mbụ
Obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa: site na Tokyo ruo Toronto
Ọ dị mma ịmara na ọ bụ ebe atọ kacha elu n'etiti obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa Obodo Asia. Mgbe ahụ, onye Europe, otu sitere na Oceania na onye ọzọ si United States. Mana, ka anyị na -achọ ime njem ma mara obodo kacha mma, na mgbakwunye na ikwu maka nchekwa n'ime isii ndị a, anyị ga -egosi gị ihe ncheta ya kacha pụta ìhè.
Ụlọ nsọ Meiji Tokyo
Isi obodo Japan dị ugbu a n'ihi na a na -eme egwuregwu Olympic ebe ahụ. Obi abụọ adịghị ya, ndị họọrọ ya dị ka ebe mgbakọ ahụ weere nchekwa ya. N'ime mkpokọta otu narị, o nwetara 92. Mana, ọ bụrụ na ọ pụtara ihe, ọ bụ maka oke ya nchekwa dijitalụ, ebe ọ bụ na nke a ọ nwetara akara 94. Obodo Japan na -ebute ọkwa a afọ isii. Mana, ọ bụrụ na maka nke a, ị kpebiri ịmara ya, anyị ga -egosi gị ụfọdụ ebe kacha atọ ụtọ.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga -ahụ na Tokyo, mana ị nwere ike bido na Ụlọ nsọ Sensoji na ụlọ nsọ Shinto Asakusa, chọtara ọnụ. N'ikpeazụ, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị gaa na mpaghara nke Harajuku, kedu ebe ị ga -ahụ nke dị oke ọnụ ahịa Ụlọ nsọ Meiji na n'okporo ámá Omotesando, nke nwere ụlọ ahịa naanị ya.
Mana, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ngosi panoramic nke obodo ahụ, gbagoo Orilọ Mori, nke nwere ihe nlere anya na ala nke 52 ma ọ bụ na Osisi Skytree, na ịdị elu ya dị mita 634. Agbanyeghị, ihe na -achọ ịmata bụ Ụlọ Elu Tokyo, oyiri ụlọ elu Eiffel (ebe a ka anyị hapụrụ gị otu isiokwu banyere nke a) wuru iji rụọ ọrụ dị ka ebe nkwukọrịta. N'ikpeazụ, ọ bụ ihe a na -ahụkarị ileta Tokyo dị egwu Ogige Ueno, ihe ijuanya mgbe okooko osisi cherry na -acha.
2.- Obodo Singapore
Obodo Eshia nke ọzọ nọ n'ọkwa nke obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa. Kpọtụrụ, ọ nwetara ọnọdụ a maka ihe owuwu ya yana, karịa ihe niile, maka ya mpụ dị ala. N'ezie, ọ nwere ọnụego mpụ kacha ala na ụwa niile.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga leta ya, anyị na -akwado ka ị gaa ebe ahụ ubi n'akụkụ ọnụ mmiri, ihe ijuanya nke ndi modernist. Nakwa na ị ga -abịaru nso Obere India, agbata obi ebe obodo a bi na nke nwere ọtụtụ ụlọ arụsị Buddha.
N'aka nke ọzọ, mgbagwoju ụlọ nke Marina Bay Sands Ọ bụ otu n'ime akara obodo ahụ, nwere ụlọ elu atọ ya na elu ya nke na -eitomi ụgbọ mmiri. Ọ dị nso na ya bụ ama ihe oyiyi ogige merlion.
N'ikpeazụ, echefula ileta mpaghara nke Clarke Quay, ya na ụlọ ya ndị tụrụ àgwà. Agbanyeghị, ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ndị a, ị gaghị agbaghara Peranakan Terrace. Na, n'akụkụ ebe ndị a, gaa Chinatown, ebe ụlọ nsọ dị Sri Mariamman, nke kacha okenye n'obodo.
3.- Osaka, onye Japan ọzọ n'etiti obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa
Ebe nke atọ na nkewa a bụ obodo Japan ọzọ, nke na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara obodo akpọrọ Obodo nke Rising Sun. N'okpuru anya ọgba aghara, obodo nke atọ kachasị ukwuu na Japan pụtara akara 90,9 n'ime 100. N'ime akụkụ anọ anyị gwara gị ka enyochala, Osaka na -enweta ọkwa kacha mma na ịdị ọcha na gburugburu ebe obibi.
Mana ị nwekwara ọtụtụ ihe ị ga -ahụ n'obodo agwaetiti Honsu. Isi ihe ncheta ya dị egwu osaka castle, wuru na narị afọ nke XNUMX na n'ime ya nke enwere ebe ngosi nka. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ obodo, ị nwere ike ịrịgo na Ụlọ elu Tsutenkaku, 103 mita dị elu ma dị na mpaghara pụrụ iche nke Shinsekai, ebe ị nwekwara ike ịhụ ụlọ nsọ Shitennoji.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na -amasị aquariums, nke dị na Osaka bụ otu n'ime ndị kacha ibu n'ụwa. O nwere ụdị dị iche iche 620 kesara na tankị 14. N'ikpeazụ, ahapụla obodo ahụ na -anwaleghị efere a ma ama ya: the okonomiyaki, nke a na -atụnyerekarị Pizza ma ọ bụ pancakes.
Rijksmuseum na Amsterdam
Anyị ga -echere ebe nke anọ iji hụ obodo Europe mbụ na ndepụta a. N'ihe gbasara nke a na-akpọ Venice nke Ugwu, ọ nwetala Ihe 88 n'ime 100. Mana ọ pụtara, ọkachasị, maka ịdị mma nke ọrụ ịdị ọcha ya na gburugburu ya, yana nghọta nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya.
Anyị nwere ike ịgwa gị obere ihe ị ga -ahụ na Amsterdam nke ị maghị. Obodo Dutch bụ otu n'ime ndị njem nlegharị anya na Europe niile na -eleta ma nwee ọtụtụ saịtị, dịka nke ya ọwa ma ọ bụ Mpaghara uhie, edepụtara n'etiti ndị ama ama n'ụwa.
Agbanyeghị, anyị ga -ekwupụta ụfọdụ ihe ncheta ya. Mgbe ị aụrụ kọfị na -ewu ewu ụlọ ahịa kọfị, ị nwere ike ịga leta Hortus Botanicus, otu n'ime ubi ndị a kacha ochie n'ụwa. Ị kwesịrị ị na -ahụ Franklọ Anne Frank, akara nke ọgụ megide arụrụala ndị Nazi, ghọrọ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie.
Mana, ọ bụrụ na anyị na -ekwu maka ndị a, ndị ama ama na Amsterdam bụ National Museum, emi odude ke ediye Obí eze site na Dam Square (ebe enwerekwa Gothic Church of Neuwe Kerk) wee lelee otu n'ime ụlọ ọrụ nka kacha mkpa na mbara ala. Na -echefughị ​​ihe Ihe nkiri, ụlọ ebe a na -egwu egwu etinyere n'ime ụlọ neoclassical dị egwu.
5.- Sydney, nnọchite anya Australia n'etiti obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa
Obodo kachasị na Australia site na nha na onu ogugu enwere na ogo a maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Mana nke kachasị na -ezo aka na nke ya nchegbu obibi. Emebere atụmatụ mmepe ya na nkwanye ugwu kachasị maka okike, ma n'ihe gbasara atụmatụ ime obodo ya na ọtụtụ ebe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ọ bụrụ na ị kpebiri ịga Sydney, anyị na -adụ gị ọdụ ka ị malite kpọmkwem na ogige ntụrụndụ dịka Egwuregwu Olympic, nke Centenario ma ọ bụ Hyde Park, yana site Ubi Royal Botanic na Ogige Taronga. Ị nwekwara ike ịnụ ụtọ ọmarịcha osimiri dị ka Manly ma ọ bụ Bondi.
Banyere ihe ncheta ya, katidral nke santa maria, ọla nke ụdị neo-gothic; nke akwa akwa sydney bay, tọrọ ntọala na 1932 na nke karịrị otu kilomita; nke Ụlọ Admiralty, oche nke General Government of Australia, ma ọ bụ ama ama Ralọ Opera, akara nke obodo oke osimiri.
N'ikpeazụ, anyị na -akwado ka ị gaa na mpaghara dịka Oké nkume, nke kacha ochie n'obodo ma jupụta na cafes, ụlọ nri na ụlọ ahịa; onye nke Paddington, ya na ụdị ụlọ Victoria, ma ọ bụ nke Chinatown, ebe a na -eme ọtụtụ emume omenala.
6.- Toronto, obodo Amerịka mbụ
Nlele nke toronto
N'ime ndepụta obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa, Toronto nke Canada bụ onye America mbụ. Ị nwetala akara nke 87,8 karịrị 100 ekele ọkachasị ndị ezigbo nchekwa onwe onye na dijitalụ nke ọ na -enye ụmụ amaala ya.
Yabụ, ọ bụrụ na ị gaa n'obodo Canada, ị nwere ike nọrọ jụụ maka mpụ. Ya mere, ị nwere ike ịnụ ụtọ njem mmụta nke ahaziri ka inyocha Ọdọ Mmiri Ontario na agwaetiti ya. N'ime ndị a, akwụkwọ Ogige Center, ebe enwere oyiri nke Toronto na mmalite narị afọ nke iri abụọ.
Agbanyeghị, ihe kacha amasị obodo bụ Ụlọ elu CN, nke dị mita 553 n'ịdị elu, bụ ụlọ nke anọ kachasị elu n'ụwa. Anyị ekwesịghị ịkọwa echiche ị nwere site na Igwe Pod, echiche nke dị mita 447 n'elu ala obodo ahụ.
Ọzọkwa, ị ga -ahụ na Toronto ụlọ nke Old Town Hall, nke ejiji neo-gothic; ihe Casa Loma, nke dị ka nnukwu ụlọ mgbe ochie; nke dị egwu Union Station ma ọ bụ ụlọ kacha ọhụrụ, mana ọ nweghị obere ọmarịcha ụlọ nke Ụlọ ihe nkiri Royal Ontario, raara nye akụkọ ihe mere eme eke, na Art Gallery, nke nwere nchịkọta nka kacha ukwuu na Canada.
Na mmechi, anyị gosiri gị obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa na -eburu n'uche mpụ ha dị ala, kamakwa ọmarịcha ọnọdụ ibi ndụ ha na nchegbu ha maka gburugburu. Agbanyeghị, anyị ga -ahapụ akụkọ a ezughị ezu ma ọ bụrụ na anyị agwaghị gị gbasara mmadụ anọ na -esochi ndị a kpọtụrụ aha na nhazi ọkwa. Ọ bụ ihe Washington, Copenhague (lee, inwere akụkọ gbasara obodo a), Seoul y Melbourne. Iji chọta Spanish mbụ, anyị ga -alaghachi n'ọnọdụ XNUMX, ebe ọ dị Madrid ozugbo sochiri Barcelona.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Obodo isii kacha dịrị nchebe n'ụwa
Es Trenc osimiri na Mallorca